ဖေ‌ဖျောဝါရီ 14, 2020 – Healthy Life Journal
ငွေကြယ်စင်ယံ အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနာတရဖြစ်ပြီး အနာကျက်ရာက အမာရွတ် ထင်တတ်ပါတယ်။ အမာရွတ်မထင်အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင် အမြဲဂရုစိုက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ အမာရွတ်ထင်ခဲ့ရင်တော့ သက်သာအောင် အောက်ပါသဘာဝနည်းတွေကို လိုက်နာရပါမယ်။ လာဗန်ဒါဆီ၊ ချမိုမိုင်းဆီ စတဲ့ မရှိမဖြစ်အဆီ...
အဆစ်နာရောဂါရှိသူ (Rheumatoid Arthritis) တို့အတွက်
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အဆစ်နာရောဂါ (Rheumatoid Arthritis) ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဆီစားလို့ရပါသလား။ A. အဆစ်နာရောဂါ (Rheumatoid Arthritis) ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ရောဂါ (Autoimmune Disease) ထဲက...